China chair Moulds fekitori uye vagadziri | HEYA
Sachigaro Moulds zvinoreva chakuvhe chinoshandiswa kuburitsa Sachigaro Mould ine jekiseni Kuumbwa muchina. Zvinoenderana nemhando dzakasiyana dzechigadzirwa, kune zvakare anovakwa epurasitiki cheya chigaro, yekupeta cheya jekiseni muforoma mugadziri, yegungwa chigaro chakuvhuvhu, nezvimwe.
Chigadzirwa Chigadzirwa Sachigaro Moulds
Mubvunzo: Kambani yako iripi?
A: Heya Mould tsvaga muNo.3, Houshi Road, Huangyan dunhu, Taizhou guta, Zhejiang, China mainland. Thers anenge maminetsi makumi mashanu kubva kuLuqiao Airport; Maminetsi makumi maviri kubva Taizhou Railway Station. We noushamwari kuti kushanyira boka redu
Mubvunzo: Ungaenda sei kufekitori yako?
A: Unogona kuuya kuHeya Mold fekitori nendege, chitima uye bhazi.
Kune angangoita maawa maviri nendege kubva kuGuangzhou kuenda kuTaizhou guta; Maawa matatu nehurefu kumhanya njanji kubva kuShanghai kuenda kuTaizhou chiteshi; 1 awa nechitima kubva kuNingbo kana Wenzhou kuenda kuTaizhou chiteshi. 3 awa nebhazi kana chitima kubva kuYiwu kuenda kuTaizhou chiteshi.
Pashure: Sachigaro jekiseni Mould
Zvadaro: Sachigaro Mould